Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha ayaa tijaabiya Dhimashada La-iskugu Gudbiyo Galmada - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Tijaabada Caafimaadka > Tijaabada Dhimashada ee Galmada Lagu Kala Qaado
Tijaabada Dhimashada Galmada La Isugu Gudbiyo waa koox cuduro la kala qaado oo ay ku faafaan galmada ama dabeecadaha isku midka ah ee galmada iyo taabashada dadban. Aad bay khatar ugu tahay bini'aadamka waxayna khatar weyn ku tahay qoyska iyo bulshada. Waxay kicisay walaac baahsan oo adduunka oo dhan ah. Sidaa darteed, difaaca cudurrada galmada lagu kala qaado ayaa noqday baaritaan muhiim ah.
Natiijooyinka aan caadiga ahayn ee Tijaabada Dhimashada Galmada Lagu Kala Qaado: Titer autoantibodies sare ayaa inta badan laga helaa serumka bukaanka. Waxaa jiray isbeddello cilmi-nafsi oo la xiriira jawaab-celinta difaaca jirka, iyo goobaha pathological inta badan waxay ahaayeen barar daba-dheeraaday oo ay la galeen lymphocytes iyo unugyada balaasmaha. La'aanta difaaca aan la garanayn, oo lagu garto qandho yar ama qandho. Ama balaadhinta limfaha. Dadka u baahan baaritaanka: Dadka looga shakisan yahay cudurrada galmada lagu kala qaado, iyo haweenka uurka leh ayaa guud ahaan codsada baaritaanka.
Kordhinta aashitada nukliyeerka iyo immunology ayaa loo isticmaalaa in lagu ogaado Tijaabooyin Dhimashada Galmada La Isugu Gudbiyo. Mabda'a aasaasiga ah waa in lagu daro qaar ka mid ah wakiilka luminescent ama waxyaabaha ka soo baxa nidaamka falcelinta difaaca, hoos yimaada ficilka kicinta ee enzymes si ay u soo saaraan luminescence, xoojinta luminescence si loo xisaabiyo qadarka antigen ama antibody in la cabbiro. Ka dib marka lagu daro kor u kaca iftiinka, iftiinka iftiinka ayaa la wanaajiyey, muddada waa la dheereeyaa, habka cabbirka ayaa lagu soo celin karaa, xasaasi ah oo sax ah.
Qalabka Tijaabada degdega ah ee Candhuufta ee Afka ee Caafimaadka
Qalabka caafimaadka afka ee HIV-ga iska-baara candhuufta xirmo degdeg ah: Cudurka xubinta taranka waa cudur lagu kala qaado galmada, badi ahaan aagga xubinta taranka. Ku dar waraabowga, jabtada, chancre jilicsan, granuloma galmada venereal iyo granuloma inguinal 5 nooc. Cudurka Venereal (STD) waa koox cuduro la kala qaado oo caan ah oo si weyn ugu baahsan adduunka. Waxa ay noqotay dhibaato caafimaad oo dadwayne oo halis ah iyada oo ay la socoto isbeddelka fidinta baaxadda faafidda, hoos u dhaca da'da bilawga ah iyo kordhinta noocyada u adkeysiga daroogada, gaar ahaan kororka weyn ee AIDS-ka. Ka-hortagga iyo daaweynta cudurrada xubinta taranka waxay noqon doontaa hawl aad u adag oo waqti dheer ah.
Jiilka 4-aad ee cusub ee Hiv Test Kit 1/2 Ag Ab Cabbitaanka Tijaabada Degdega ah
Jiilka 4-aad ee cusub ee Baadhista HIV 1/2 Ag Ab Cabbitaanka Tijaabada Degdega ah: Cudurka xubinta taranka waa cudur lagu kala qaado galmada, badi ahaan aagga xubinta taranka. Ku dar waraabowga, jabtada, chancre jilicsan, granuloma galmada venereal iyo granuloma inguinal 5 nooc. Cudurka Venereal (STD) waa koox cuduro la kala qaado oo caan ah oo si weyn ugu baahsan adduunka. Waxa ay noqotay dhibaato caafimaad oo dadwayne oo halis ah iyada oo ay la socoto isbeddelka fidinta baaxadda faafidda, hoos u dhaca da'da bilawga ah iyo kordhinta noocyada u adkeysiga daroogada, gaar ahaan kororka weyn ee AIDS-ka. Ka-hortagga iyo daaweynta cudurrada xubinta taranka waxay noqon doontaa hawl aad u adag oo waqti dheer ah.
Treponema Pallidum Tp Xirmada Xariirta Waraabaha
Treponema pallidum TP Syphilis xirmada xariijinta degdega ah ee baaritaanka: Baaritaanka degdega ah ee waraabowga waa tallaalka wareegga dambe ee tallaalka isla mar ahaantaana lagu ogaanayo iyo kala soocidda waraabowga Antibody ee serum, balaasmaha, ama dhiigga oo dhan. Waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo baaris ahaan iyo sidii gargaar ahaan loogu ogaan lahaa infekshanka waraabowga.
Xirmooyinka Baadhista Dhiiga Kahortagga ee Hiv degdega ah
Xirmooyinka dhiigga ee degdega ah ee ka hortagga HIV-ga xirmada baaritaanka degdega ah ee HIV: Cudurka xubinta taranka waa cudur lagu kala qaado galmada, badi ahaan aagga xubinta taranka. Ku dar waraabowga, jabtada, chancre jilicsan, granuloma galmada venereal iyo granuloma inguinal 5 nooc. Cudurka Venereal (STD) waa koox cuduro la kala qaado oo caan ah oo si weyn ugu baahsan adduunka. Waxa ay noqotay dhibaato caafimaad oo dadwayne oo halis ah iyada oo ay la socoto isbeddelka fidinta baaxadda faafidda, hoos u dhaca da'da bilawga ah iyo kordhinta noocyada u adkeysiga daroogada, gaar ahaan kororka weyn ee AIDS-ka. Ka-hortagga iyo daaweynta cudurrada xubinta taranka waxay noqon doontaa hawl aad u adag oo waqti dheer ah.
Qalabyada Caafimaadka Warabowga Antibody (tp) Qalabka Tijaabada Degdegga ah
Medical Supplies syphilis antibody (tp) xirmada tijaabada degdega ah: Cudurka xubinta taranka waa cudur lagu kala qaado galmada, badiyaa dhanka xubinta taranka. Ku dar waraabowga, jabtada, chancre jilicsan, granuloma galmada venereal iyo granuloma inguinal 5 nooc. Cudurka Venereal (STD) waa koox cuduro la kala qaado oo caan ah oo si weyn ugu baahsan adduunka. Waxa ay noqotay dhibaato caafimaad oo dadwayne oo halis ah iyada oo ay la socoto isbeddelka fidinta baaxadda faafidda, hoos u dhaca da'da bilawga ah iyo kordhinta noocyada u adkeysiga daroogada, gaar ahaan kororka weyn ee AIDS-ka. Ka-hortagga iyo daaweynta cudurrada xubinta taranka waxay noqon doontaa hawl aad u adag oo waqti dheer ah.
Xarigga Tijaabada Degdegga ah ee Dhiiga ee Ngh
Medical NGH dhiiga xariijimaha tijaabada degdega ah: Cudurka Venereal waa cudur lagu kala qaado galmada, badi ahaan aagga xubinta taranka. Ku dar waraabowga, jabtada, chancre jilicsan, granuloma galmada venereal iyo granuloma inguinal 5 nooc. Cudurka Venereal (STD) waa koox cuduro la kala qaado oo caan ah oo si weyn ugu baahsan adduunka. Waxa ay noqotay dhibaato caafimaad oo dadwayne oo halis ah iyada oo ay la socoto isbeddelka fidinta baaxadda faafidda, hoos u dhaca da'da bilawga ah iyo kordhinta noocyada u adkeysiga daroogada, gaar ahaan kororka weyn ee AIDS-ka. Ka-hortagga iyo daaweynta cudurrada xubinta taranka waxay noqon doontaa hawl aad u adag oo waqti dheer ah.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Tijaabada Dhimashada ee Galmada Lagu Kala Qaado oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Tijaabada Dhimashada ee Galmada Lagu Kala Qaado soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Tijaabada Dhimashada ee Galmada Lagu Kala Qaado la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.